Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica ngoku Ijolise kwiindwendwe ezizizigidi ezi-3 zokuhamba ngenqanawa ngo-2025
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. Edmund Bartlett, udize ukuba kwilinge lokukhulisa icandelo lezokhenketho, iJamaica iya kujolisa kwiindwendwe ezizizigidi ezithathu zeenqanawa ngo-2025.
Ngaphambili namhlanje, wenza esi sibhengezo ngexesha leJamaica Vacations Limited (JAMVAC) Ulawulo oluPhezulu kunye neBhodi Retreat, ebanjwe eRoyalton Blue Waters eTrelawny.
“Injongo yethu kukuqinisekisa oko Jameyikha ifumana abakhweli abahamba ngenqanawa abazizigidi ezi-3 ngo-2025. Sakhe iziseko zophuhliso, kwaye siza kwenza umsebenzi owongezelelekileyo kwindawo yentengiso ukuze siphumeze le njongo ibalulekileyo,” utshilo uBartlett.
"Amandla aza kufakwa yiJamaica Tourist Board kunye neJAMVAC kwimarike aya kuba kukubeka iJamaica, hayi njengendawo ekhethwayo yeCaribbean, kodwa indawo enomtsalane kubantu baseYurophu ngakumbi, kunye neAsia kunye kuMbindi Mpuma,” wongeze watsho.
U-Bartlett waphawula ukuba i-JAMVAC iya kuqhubeka isebenza ngokusondeleyo kunye ne-Port Authority yaseJamaica, i-Jamaica Tourist Board (JTB), kunye neNkampani yoPhuhliso lweMveliso yezoKhenketho (TPDCo) ukufezekisa le njongo.
Iindaba ezamkelekileyo ziza phakathi kweengxelo ezithi icandelwana lokuhamba ngenqanawa, ephinde yavulwa ngo-Agasti, ikhula ngokuthe ngcembe. I-Planing Institute of Jamaica (PIOJ) inike ingxelo yokuba abakhweli abahamba ngeenqanawa bafikelela kwi-8,379 kwiinqanawa ze-5 kwiinyanga zika-Agasti noSeptemba, ngokumalunga nanye ngexesha elihambelanayo le-2020. kuqikelelwa ukuba ikhule nge-114.7% kwisithuba sikaJulayi ukuya kuSeptemba ka-2021, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo ngo-2020. Ukufika kwabatyeleli abafikayo ngeenyanga zikaJulayi no-Agasti ka-2021 kunyuke ngama-293.3%, kwangelo xesha linye ngo-2020.
I-JAMVAC liqumrhu likarhulumente leSebe lezoKhenketho kwaye lasekwa ngo-1978. Lijongana neepotfoliyo zoBuphathiswa zokuhamba ngeenqwelomoya kunye nokuhamba ngenqanawa. Umyalelo wayo kukudala iimeko zokuba amanani abatyeleli baseJamaica akhule ngesantya esikhawulezayo. Ukwajolise ekunikeni, ukukhusela, kunye nokwandisa umthamo weenqwelo-moya kuzo zombini iindlela ezicwangcisiweyo neziqeshiweyo ngokusebenzisana nabathwali abakhoyo nabanokubakho abatsha ukuqinisekisa umthamo owaneleyo kwindlela nganye. Ngaphaya koko, ithengisa ngokuthe ngqo kwiiarhente zokuhamba ngenqanawa, icela iminxeba ukuya kumazibuko aseJamaican ukusuka kwiindlela zokuhamba ngenqanawa, kwaye iqinisekisa ukuba amava abakhweli ahlala ekwimeko entle kakhulu.
I-JAMVAC ilawulwa yiBhodi yabaLawuli, ekhokelwa nguBertram Wright, kunye noJoy Roberts nguMlawuli oyiNtloko wangoku.